Streak: Chengetedza Wako Wekutengesa Mapaipi muGmail Neiyi Yakazara-Inoratidzirwa CRM | Martech Zone
Kugadzira mukurumbira wakanaka uye kugara ndichishanda pane yangu saiti, kutaura kwangu, kunyora kwangu, kubvunzurudza kwangu, uye mabhizinesi angu… huwandu hwemhinduro uye nekutevera zvandinofanira kuita kazhinji zvinotsvedza kuburikidza nekutsemuka. Handina mubvunzo kuti ndarasa mikana mikuru nekuda kwekuti handina kutevera netarisiro nenzira yakakodzera.
Panyaya iyi, zvakadaro, ndeyekuti iro reshiyo yekubata ini yandinofanira kupfuura kuti ndiwane mhando yemabhizimusi ebasa yakakura kwazvo. Muchokwadi, ndine chokwadi chokwadi kana ndikatevera nechikumbiro chose chandisingazombove nenguva yekupedzisa basa chairo revatengi! Nekudaro, kuvaka pombi yakasimba kwakakosha iwe paunopedzisa mapurojekiti uye nekuenderera mberi kubva kune vatengi. Unofanirwa kushanda zvakanaka nenguva yako… nguva nenguva uchibata tarisiro yega yega, uchivakwanirisa, uye uchivafambira mberi kuburikidza neako maitiro ekutengesa.
Bhizinesi rega rega rakakura rine pombi yekutengesa inoshanda kwavanoziva nhanho yavo tarisiro, ndiani ari padyo nekuvhara, uye kugona kufungidzira kugona kwavo kuvhara nekukura bhizinesi. Izvi zvinotyisa kwandiri uye handitende kuti mamiriro angu akasarudzika. Ini ndinotenda mabhizinesi madiki mazhinji anonetsekana nekugadzirisa pombi yavo yekutengesa uye anokwanisa kukodzera uye nekusaitisa inotungamira. Kunyanya kana ivo vasina kudzidziswa zvine hunyanzvi uye vane ruzivo rwekutengesa.
Apa ndipo pane a Customer Relationship Management (CRM) sisitimu inodikanwa. Uine CRM, unogona kumaka tarisiro yako, chengeta zvinyorwa pavari, kuona danho reiyo yekutengesa yavari mairi, gadzira yekutevera mabasa, uye nekubudirira kubata ako bhizinesi hukama Uye… kana sangano rako riine nhengo dzakawanda, unogona kunyatsobata maoko-kuregedza uye kuisazve mabasa pakati pevashandi vako.
Streak: Gadzirisa Yako Yekutengesa Mapaipi Mukati meGmail
Kugadzirisa uye kugadzirisa zvekare imwe software package kuti uite izvi ibasa rakawanda, kwete zvishoma. Ruzhinji rwechiitiko chinoitika kuburikidza neemail, saka kuve neCRM inosangana neyako email chikuva chinofanirwa kuve nyore uye kugona. Kana bhizinesi rako richishanda pa Google, zvitsidzo inogona kunge iri mhinduro kwayo iwe.
Streak inosangana yakanangana neako Gmail inbox, ine mabhurawuza plugins, uye ine yakakura mobile application. Zvimiro zveStak zvinosanganisira:
Gmail Yakabatanidzwa CRM - zvese zvaunoda kuti usvike ku "closed-won" zvakahwanda muemail yako. Streak inotora madhiri ako uye inowedzera iyo iripo Gmail kuti ive inoshanduka, yakazara-inoratidzwa CRM.
Gadzirisa Yako Maitiro Ekutengesa - Kana yako nzira yekutengesa ikachinja, kugadzirisa Streak kuri ipapo uye kujeka. Wedzera nyowani nyowani yemhando ipi neipi, gadzirisazve matanho, kana kudzima data chero nguva. Columns yakanyatsogadzirirwa kugamuchira manhamba, yemahara-fomu zvinyorwa, ekudonhedza-pasi mamenyu, mabhokisi ekutarisa, uye chero chimwe chinhu chaungangoda iwe.
Tengesa Kubatana - Vese vanobatsirana pamukana vanogona kuverenga maemail akazara kunyangwe isina kuiswa mu shinda. Iwe unogona zvakare kudzora kuwanikwa kwedata kune yako nhengo dzechikwata nemabasa emvumo.
Inbox Panel - Chengeta zvinyorwa, govera mabasa uye nekutevera-kumusoro kubva panhare zvakanyatso kubatanidzwa kuburikidza neStraak's browser plugins yeChannel kana Safari.
Email Snippets - Isa inowanzo kudzokororwa zvinyorwa nekiyi yekuraira. Kurumidza kunyora zvakakwana sumo, yekutevera, uye zviyeuchidzo. Bvisa kutambisa nguva uye kudzokorora kuneta.
Email Kutevera - Kutsvaga kunokuzivisa iwe kuti, kupi, uye kangani email inoonekwa. Shandisa Streak kudaidza lead mune chaiyo iyo nguva yavari kufunga nezvako.
Tsamba Meme - Streak inobvisa kuomarara kwemazhinji emaemail. Nyora meseji yako, sarudza runyorwa rwevanogamuchira, uye utumire.
Mapaipi Kushuma - Kugadzira machati machena uye magirafu zviri nyore neStraak. Ona mafambiro anoita mari kuburikidza nepombi yako uye nevabatsiri varikukanganisa zvakanyanya.
Saina Kuti Uite Simba
Kuzivisa: Ndiri mubatanidzwa we zvitsidzo uye ndiri kushandisa yangu yakabatana link mune ino chinyorwa.
Tags: android appAndroid crmbrowser pluginchrome pluginCRMmutengi wehutano hwehukamateveraGmailgmail crmgmail yekuteveragoogle suitegoogle workspaceios AnwendungiOS crmtungamira basakutungamira chinzvimbotsamba inosanganaMapaipitarisirokuwedzera kwe safaripombi yekutengesazvitsidzomabasaboka rinotengesa